Madaxwaynaha Donald Trump ayaa raaligelin ka siiyay Maxkamadda Sare ee Garsoorka Brett Kavanaugh “xanuunka iyo dhibaatada ba’an” iyo qoyskiisa “waxaa lagu qasbay inuu ku adkaysto” | Weheliye Online
Madaxwaynaha Donald Trump ayaa raaligelin ka siiyay Maxkamadda Sare ee Garsoorka Brett Kavanaugh “xanuunka iyo dhibaatada ba’an” iyo qoyskiisa “waxaa lagu qasbay inuu ku adkaysto”
Madaxweynaha Donald Trump ayaa raaligelin ka siiyay Maxkamadda Sare ee Garsoore Brett Kavanaugh oo ahaa “xanuunka iyo dhibaatada ba’an” isaga iyo qoyskiisaba “waxaa lagu qasbay in ay ku adkaystaan” inta uu socdo nidaamka xaqiijinta, marka uu dhaco munaasabadda dhaarinta ee White House habeenkii isniinta.
“Kuwa u duulaya inay u adeegaan dalkayaga waxay mudan yihiin qiimeyn caddaalad ah oo sharaf leh, ma ahan olole siyaasadeed iyo mid shakhsi ah oo ku salaysan been abuur iyo khiyaano,” ayuu yiri Trump.
“Maxaa ku dhacay qoyska Kavanaugh waxa ay ku xad gudbeen fikradda kasta oo ah caddaalad, daacadnimo iyo nidaam cadaalad ah,” ayuu sii raaciyay madaxweynaha.
Trump ayaa sheegay in nin ama naag ku nool wadankan “waa in mar walba lagu tiriyaa kuwa aan waxba galabsan ilaa iyo inta la xaqiijinayo dambiga.”
“Adigu, sayidad, baadhitaan taariikheed, ayaa la xaqiijiyay inaan waxba galabsan,” ayuu Trump ku yiri Kavanaugh. FBI-da ayaa baaraya eedeymaha ka dhanka ah Kavanaugh, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo horjeeda, laakiin waxa lagu dhaleeceeyay dimuqraadiyaddu inaysan ahayn baaritaan buuxa.
Munaasabadda ayaa ka dhacday qolka Bariga – isla goobta uu madaxweynuhu markii ugu horreysay ku dhawaaqay magacaabista Kavanaugh 13 toddobaad ka hor. Xubin kasta oo fadhigeedu yahay Maxkamadda Sare waxay joogtaa xafladda.
Kavanaugh ayaa xaqiijiyay Senate Sabtidii, isagoo helay 50 “haa” codad – ugu yar caddaaladda Maxkamadda Sare ee xilligan casriga ah. Hawlgalkan ayaa lagu soo oogay eedeeymo ah kufsi galmo iyo habdhaqan xumo la soo daayay todobaadyo ka hor inta aaney dhagaystayaashu codkooda dhiiban. Wuxuu beeniyay dhammaan eedeymaha.
Qodobbada la xidhiidha: Wicitaanada qaylo-dhaaneed Kavanaugh ayaa ku eedeeyay ‘khiyaano ay sameeyeen’ Democrats ‘
Hadalka uu ka jeediyay xafladda, Kavanaugh ayaa sheegay in nidaamka xaqiijinta shucuureed ee dareenka “isaga tijaabiyay”, laakiin looma baddalin, habkaygu waa inaan isku mid noqdo.
Kavanaugh waxa uu carrabka ku adkeeyay inuu noqon doono “madaxbannaan” iyo “cadaalad” cadaalad ah maxkamada sare ee qaranka. “Maxkamadda Sare waa hay’ad sharci ah – ma ahan mid madaxbannaan ama mid siyaasadeed, cadaaladyaduna ma fariistaan ​​dhinacyada iska soo horjeeda.”
“Hannaanka xaqiijinta Senate-ka wuxuu ahaa mid muran iyo dareen ah,” ayuu yiri Kavanaugh. “Hawlgalkani wuu dhammaaday, hadda diiradda la saaro waa inaan noqdo caddaaladda ugu wanaagsan ee aan noqon karo.”
“Xafiiskan ayaan u mahadnaqayaa oo aan qadhaadh lahayn, Maxkamadda Sare waxay raadineysaa inay noqoto ciidan xasilloon iyo midnimo.”
Kavanaugh ayaa sidoo kale xusay kooxdii ugu horeysay ee shaqaale ah ee loo shaqaaleysiiyo sida caddaaladdu tahay dhammaan dumarka, oo ah kii ugu horreeyay taariikhda Maxkamadda Sare.
Horaantii Isniintii, Trump ayaa sheegatay eedeymaha ku wajahan Kavanaugh inay ahaayeen “been abuur ah oo ay sameeyeen Democrats.” Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay “shariicada” dadka jahawareerka ah ee “Kavanaugh” in uu “xaalad xun ku dhaco” inta uu socdo nidaamka xaqiijinta. Madaxweynuhu wuxuu hal dhibic horay u ahaa mid la mid ah Christine Blasey Ford, oo ka markhaati furay Congress ka hor inta uusan jinsi u galin jinni. Burburinta, wakhtiga markhaatiga, waxaa loo yaqaan Ford “markhaati wanaagsan” waxaana uu sheegay in uu ixtiraamo booskeeda.
Kavanaugh ayaa maamulay dhaarta rasmiga ah ee dhaarta iyo garsoorka ee Garsoore Madaxa Garsoorka John Roberts iyo howlgabnimadii Caymiska Anthony Kennedy ka dib markii uu xaqiijiyay Senateka.
Cadaadiska ugu dambeeyay ee uu ku biiri lahaa kursiga keydka, Neil Gorsuch, ayaa sanadkii la soo dhaafay ku hadlayay dhaartiisii ​​uu ku dhuftay White House Rose Garden. Cadaaladda Samuel Alito ayaa sidoo kale ka hadlay dhaartiisii. Si kastaba ha ahaatee, Justices Sonia Sotomayor iyo Elena Kagan ma aysan bixin wax hadal ah inta lagu guda jiro munaasabaddooda ku dhaarashada, iyaga oo dooranaya in ay ka hadlaan dib u soo celinta Madaxwaynaha Barack Obama ee ku saabsan .
Previous articleWayne Rooney ayaa sheegay in ciyaartoyda Manchester United ay u baahan yihiin inay ‘istaagaan’ Jose Mourinho
Next articleTrump apologizes to Kavanaugh for sexual misconduct allegations during confirmation